Gịnị ka ịgba ígwè na-na obi gị? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Bike obi - nkịtị ajụjụ
Bike obi - nkịtị ajụjụ
Gịnị ka ịgba ígwè na-na obi gị?
Mgbeịgba ígwèakpali na mmaobi gi, Akpa ume na mgbasa, mbenatanke giihe ize ndụ nke ọrịa obi.Cygba ígwèewusiobi gịakwara, na-ebelata izu ike izu ike ma na-ebelata ogo abụba ọbara.
(iku ume) (obi obim) - oburu na onwere akuku aru m nke m gaghi eji egwu, o bu obi m. Ana m amata ngwa ngwa ọ na-akụ mgbe ọ na-agba ịnyịnya ma na-egosipụta ya na nlele obi dị elu ọtụtụ afọ. M na-eji ya dị ka a ọtụtụ nke ọzụzụ m na ọ bụghị dị ka a dị mkpa ngwa nke na-m ndụ - na-eme ka obi gị ọnụego nāda # mbà - ma e nwere ọtụtụ ọdachi akụkọ nke na-agba ígwè na-ata ahụhụ si na obi ọgụ ma ọ bụ gbasara obi njide mgbe nọkwa, ma eleghị anya ndị agadi ọkwọ ụgbọala nwere laghachiri ọzụzụ mgbe afọ nke ndụ dị elu ma ọ bụ ndị na-eto eto na-eto eto bụ ndị ọdachi dakwasịrị ndụ ha.
Na mgbe ahụ, e nwere ihe nke atọ ụdị, na-agba ígwè, onye, ​​dị ka m, emeela ka obi ha egwu egwu n'ihi na afọ na-enweghị echiche banyere ya, ma onye ahụ? chọta onwe ha na arrhythmias ma ọ bụ myocardial fibrosis. Nke a nwere ike ịbụ nsonaazụ igwe kwụ otu ebe ha? Iji chọpụta, anyị zutere a cardiologist bụ ọkachamara na egwuregwu na ihe omumu, Dr. Graham Stuart, ya onwe ya a na mbụ Ironman, na-agba Sports Cardiology UK, a ụlọ ọrụ na-adụ ọdụ, researches na evaluates na-eme egwuregwu.
Ya mere, onye ka mma inye anyị azịza anyị na-achọ? Olee otú nchegbu anyị kwesịrị na ihe ndị anyị pụrụ ime? iji hụ na anyị na-okwu ike? Ma mgbe ahụ ihe m n'ezie n'ezie ụjọ banyere na-aga na-etinye onwe m site na udomo oro ahụ ma ọ bụrụ na m na n'ezie n'ihe ize ndụ. (Ufiop music) (obi monitor beeps) (rhythmic synth music) Ma tupu anyị amalite, ka ichikota ụfọdụ bụ isi usoro ndu. A obi mmadụ bụ a muscle.
Ọ mejupụtara anọ ulo nile, abụọ elu ndị a na-akpọ atria na abụọ ala ndị a na-akpọ ventricles. Nri ventricle nfuli deoxygenated ọbara ngụgụ ebe ọ wereziiri oxygen wee na-alaghachikwuru ekpe atrium, mgbe ahụ, si n'ọdọ nke ekpe ventricle ka ndị fọdụrụ n'ime ndị ahụ, ụbụrụ, ụkwụ, wdg na a freshly oxygenated ọbara oke tupu ya alọghachi n'aka nri atrium
Ugbu a ọ bụla onye ọ họọrọ na-ebute obi otiti ọ bụla, ọsọ ọ na-akụ na-adabere na ntinye ụbụrụ gị. Ugbu a gịnị ma ọ bụrụ na ihe agahie? Ọ dị mma, nkụchi obi bụ mgbe ọbara na-eweta obi na-egbochi na mberede, ọkachasị n'ihi ọrịa akwara obi, nke bụ ihe na-ewulite cholesterol. Gbasara obi njide bụ a na mberede na ọnwụ nke n'obi ọrụ na-emekarị emee ka a n'ihi nke eletriki na-enwe nsogbu obi gị n'afọ iri na ụma na-akpọ arrhythmia.
A obi agha pụrụ iduga gbasara obi njide, ma dị ka anyị ga-ahụ, ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka arrhythmias nakwa. Ọzụzụ Kasị Elu Pụrụ Imebi Ihe Ize Ndụ Gị? - Ọ bụrụ na ị nwere ihe odide pụrụ ịrịa a nsogbu obi, ee, ọ pụrụ. Ke ofụri ofụri, oké mmega dị mma maka ahụ ike gị, ma e nwere ihe mmewere nke nkịtị uche ebe a.
Yabụ ọ bụrụ na agụghị akwụkwọ ma gbalịsie ike, ọ gaghị abara gị uru ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-eme ogologo oge oké ntachi obi ọzụzụ, o yiri ka ndị ọkachamara na-eme egwuregwu na-egosi na ị na-ebi ogologo. Gịnị bụ anya bụ ebe e nwere a subgroup na ọ na-eme ihe ọjọọ na anyị amaghị ezu banyere ya, na anyị maara na ihe karịrị a ụfọdụ ego nke omumu, dị nnọọ ka unu, n'agbanyeghị otú dabara na ị bụ, ọ bụrụ na ị na-eje ije site na Wales ruo ụbọchị ise ị ga - enwe ihe mgbu - ee - ma echere m na otu ihe ahụ bụ eziokwu banyere obi na ọkwa ọzụzụ ị na - etinye physiology n'okpuru nrụgide mgbe ị na - ele obi mmadụ anya mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga - achọpụta na nri ventricle-abawanye, ekpe ventricle bụ obere, na ọtụtụ n'ime mgbanwe ndị a laghachi nkịtị n'ime ụbọchị ole na ole.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-ewe a di na nwunye nke izu, ma ọ bụrụ na ị na-eme a Biochemical ule, a ọbara ule, ị ga-ahụ na na ọkwa nke a umi n'ezie akpọ troponin na-elu- Ah, ee, na a ihe ọ bụ m na-nchegbu .
Na-obi m na-egosi mmebi ka anya dị ka o kwere mee mgbe afọ 27? Enwere m ike ma ọ bụrụ na nyocha ahụ agaghị agwa ihe niile, mana ọ ga-egosi ọtụtụ ihe ma ọ ga - amalite site na m na - ewere akụkọ ahụike m tupu eme EKG nke na - esochi ma nyochaa akara eletriki nke obi m mepụtara, n'ikpeazụ echocardiogram, otu ofdị ultrasound scan na-eji ụda ebili mmiri iji mepụta ihe oyiyi na-akpali akpali nke ihe na-eme n'ime. (Heartbeats) - Ò nwetụla ji nke obi mgbu ma ọ bụ a ọduọ, na-ekwesịghị ekwesị ọduọ obi otiti mgbe na-egosipụta? - dịghị - Ya mere, gị EKG egosi a typical egwuregwu mgbanwe akpọ Rd repolarization bụ na ị na-atụgharị gị n'aka ekpe ma na-etinye aka ekpe gị, ekpe ogwe aka n'azụ gị isi, ị na-na-anụ a ikwommiri na a ikwommiri bounces uda mmiri na ebili mmiri si mkpụrụ ndụ ọbara uhie mgbe ha gafere otu n'ime valves. (Ikwommiri mkpọtụ) N'ihi ya, nke a bụ ịgafe nke akpa ume valvụ.
N'ebe ahụ, na mpaghara a, dịka ọmụmaatụ, ana m achọ oghere n'ime obi, nke ahụ bụ arịa ọbara nke na-eburu ọbara, ọbara ọbara, site n'ahụ ruo imeju. Ma ihe m na-achọ ka ị na-eme a abụọ bụ na sniff. (Imi) Ugbu a ị na-ahụ ihe mere? The ọbara arịa ka abawanye site 24,6 millimeters 6 millimeters. (Synth Music) - Tupu anyị ga-esi m ná nkwubi ezie, ka mee ndị a abụọ ọzọ dị mkpa ajụjụ maka ndị agadi na-alọghachi na egwuregwu na mgbe tọrọ ọkwọ ụgbọala nwere ike imeri ihe ize ndụ nke mberede gbasara obi ọnwụ.
Nri, yabụ na anyị nwere ike ikwu maka ụdị mmadụ atọ akọwapụtara nke ọma, na nke mbụ ga-abụ ndị okenye na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịlaghachi n'ihe ize ndụ nke ịnweta nje a na-agba ịnyịnya wee nwee ike mgbe ọnwa ole na ole gachara ma ọ bụ ọbụlagodi afọ ole na ole nke ọzụzụ n'ime nke a oké eme? - Ya mere, ọ bụrụ na gị na nwanne nna nwere obi agha na 40 na nna gị nwere obi agha na 38 na ị na-35 afọ, mere ihe ọ bụla egwuregwu maka afọ 20, ma chọrọ na-amalite ịgba ígwè, ọ ga-abụ nnọọ mma ndụmọdụ ka anam ihe ntule tupu na ọ bụrụ na ị nwere na akụkọ ezinụlọ gị ga-eme ihe ntule na agbanyeghị. O yikarịrị ka ọ ga - abụ na enwere cholesterol dị elu n'ezinụlọ gị nke a ga - emeso n'oge a, yana otu n'ime ọgwụgwọ kachasị mma bụ mmega ahụ, mana ịkwesịrị ime nke a n'ụzọ gụsịrị akwụkwọ ma nwee ezi uche mgbe ịchọrọ ịchọta ma ọ bụrụ nwere a akwara akwara nsogbu na-eche ka ịzụlite. Ntụnyere na akwara ụkwụ gị na-afụ ụfụ mgbe mgbatị ahụ gasịrị, ha na-afụ ụfụ karịa mgbe a zụrụ gị nke ọma.
Na m na-eche n'obi na-eleghị anya na-eme ihe yiri nke ahụ, m na-ekwu, na-aga azụ gị ajụjụ banyere onye ga-achọ nke a, na-ekwu na onye na-anụ ihe a si m gosh, m mkpa ịmalite na-egosipụta. Ọ bụrụ na ọ zụbeghị ogologo oge, nwoke na-eto eto dị ka MAMIL. Ha maara na ọ na-adịbu azụmahịa ndị nọ na golf N'ezie, ugbu a, ha na-na na na ha na anyịnya igwe na ihe nile technology.
M ga na-atụ aro ha na-enyocha, na n'ezie, mgbe ị see mgbatị, na igwe-ekwu na-enyocha. Gịnị kpatara nke a? bụ mgbe kpọmkwem ụdị A àgwà ndị n'ezie chọrọ ịbụ mpi, ma ha nwere na-wuru na-eji nwayọọ nwayọọ na ha anaghị ama ihe ma ọ bụrụ na ha nwere ihe kpatara nsogbu. Ya mere, echere m na a dụrụ otu a ọdụ ka ha nyochaa tupu oge eruo, ọkacha mma na onye ọka mmụta egwuregwu, n'ihi na ị na-achọ ihe doro anya.
pro ịgba ọsọ ụmụ nwanyị
Ya mere ị na-ekwu, gịnị ka m kwesịrị ilezi anya, gịnị nwere ike ịbụ ọkọlọtọ ọbara ọbara nke m ga-eduga na ịbụ. Ma eleghị anya, ihe kachasị mkpa bụ ma ọ bụrụ na ị gafee mgbe ị na-emega ahụ, yabụ ọ bụrụ na ị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ígwè gị na mberede, ị na-echegharị, na-ada n'ụgbọala gị, gafere, ma ọ bụ na-akwụsị, nke ahụ bụ Red It nwere ike ịbụ na-akpata nchegbu, ma, ị na-chọrọ ikpe. Dịtụ iche bụ ndị na-ozugbo na-eche otú a mgbe ha na-akwụsị na-egosipụta, na nke ahụ bụ nnọọ nkịtị.
Ya mere, mgbe ị na-eme Bristol 10K ị na-ahụ na nnọọ ole na ole ọgwụgwụ elu dị ebu n'elu akara, mgbe ahụ, ebube na mgbe na-akpọsa na-eme ka ị na-adị mma karịa, na nke ahụ bụ nnọọ dị ka otú gị ahu na-aga site a elu obi ọnụego ka a ala otu Heart ọnụego mgbanwe, gị ọbara mgbali na mberede tụlee, ị na-a obere dehydrated, ị na-eche ike. Nke a dị mma, nkịtị, na-emekarị kpamkpam nkịtị. Ma ọ bụrụ na ị soro m, ị ga-enwe mmetụta dị mma, mgbe ahụ ị gbadaa, nke ahụ bụ ọkọlọtọ na-acha uhie uhie. - categorydị nke abụọ ga-abụ ndị na-eto eto.
E nwere ọtụtụ nke ọma mara ikpe jiri ịnyịnya ígwè na nke ikpeazụ afọ ole na ole, ọ bụghị nnukwu nọmba, ma onye ọ bụla bụ ọdachi n'onwe ya, ma ndị a na-eto eto, dị nnọọ dabara, nkà ndị mmadụ, onye na mberede anwụ anwụ nke nsogbu obi. Anyị nwere ike isi na-enye ndụmọdụ na-eto na-eme egwuregwu, ikekwe ịchọpụta ma ọ bụrụ na ha nọ n'ihe ize ndụ? - m ga-kwuru kpọmkwem banyere mbụ mgbe mgbe ọ na-abịa ndụ, ma n'ihi na ihe ọ bụla egwuregwu na m ga-arịọ ihe Mmeju na-e. Ụfọdụ Mmeju na-ebu nnọọ elu doses nke caffeine nwere ike ime ka nsogbu.
Ya mere nke a bụ nke mbụ, dietary emeju. Nke abuo, enwere ihe mgbaàmà? Ajụjụ bụ? Bụ ihe a a mgbaàmà na-maara nke, ọ pụrụ ịbụ a ịdọ aka ná ntị? Ọfọn, amagh onwe ọzọ ma ọ bụ gị obi otiti na mberede na-eti na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ obi mgbu - Ya mere, ọbụna na-eto eto na-eme egwuregwu - Ọbụna na-eto eto na-eme egwuregwu, ee, otú ahụ An inappropriately ngwa ngwa obi otiti bụ mara mma nke ukwuu na-eto eto na-eme egwuregwu ndị na-predisposed ka ndiiche rhythms mgbe mgbe, na ọtụtụ n'ime ha, enwere ike gwọọ ya kpamkpam. Ya mere ọ bụrụ na i nyochaa ha niile.
Anya isi na ị na-enyocha onye ọ bụla site afọ 15, ị ga na-na-a nnọọ obere nọmba ya na i nwere a igbochi akpata mberede gbasara obi ọnwụ, kama ọ na obere nọmba ị nwere ike nwere ike ịzọpụta ndụ gị. A ga-abụ onye na ọbụna nta ọtụtụ na ị ga-achọpụta na ka nwere a nwere ike na-egbu egbu nsogbu obi. Yabụ na ọkwa ọnụọgụgụ, ọ na-esiri ike igosipụta nyocha ahụ.
Ọ bụ a otutu mfe n'ihi na onye ọ bụla n'ihi na ị pụrụ ịhụ na i nwere ihe na-bụ ngwọta. Ikwesiri iburu n'uche na ị nwere ike ịchọta ihe na-agwa gị ka ị kwụsị egwuregwu ndị ọkachamara na nke nwere ike ịbụ ndụ maka ọkachamara egwuregwu. Mgbe i nwere gị screening onwe gị, ị maara na egwu ọ na-akpata.
Ọ dabara nke ọma ugbu a na ihe niile dị mma, ma ọ nwere ike ekemende ihe aghụghọ dị ka a ubé lengthened QT nkeji na nwere ike kwuru na ị nwere nke a nwere ọnọdụ na anyị na-adịghị maara n'ezie ihe ọ pụtara na ị na dị ka otu onye, ​​na ị na-ekpe na ejighị ihe n'aka na mgbe anyị na-ekwu, nke ọma, anyị ga-enyocha gị na ụmụ gị, anyị ga-enyocha ndị mụrụ gị, ụmụnne gị, na anyị amaghị kpọmkwem ihe na-esi. N'ihi ya, e nwere ebe nke ejighị ihe n'aka na nke ahụ bụ ike akụkụ nke screening - ma m na-eche na nkasi-obi bụ na ị na na-na na na-etinye ya na onodu nke ahụ bụ na, statistically, ohere nke ihe na-emenụ bụ ebughibu .- Exactly.- Na.
Mgbe ahụ, banye na nke atọ anyị na-agba ịnyịnya ígwè bụ ndị na-agba ịnyịnya kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ bụ oge maka results.- gị ECT na-egosi mgbanwe ụfọdụ Com dakọtara na ịbụ onye na-eme egwuregwu.
Ya mere, gị obi ọnụego dịtụ ngwa ngwa. Ọ dịchaghị nwayọ, ọ dị 57 kwa nkeji. Have nwere ọkwa ebe ahụ na EKG gị ka akpọrọ gị na mbugharị oge mbụ, mmalite nke obi gị, nnukwu nsogbu bụ ebe a.
Obere mkpumkpu azụ bụ Oops, e nwere nnukwu sub-strok. Bilie na dobe ndekọ ọ ga-abụ ebe ahụ. - Right, dịkwa mma. - Ma na n'aka na obi gị n'afọ iri na ụma na-butere site na a ubé ala ọnọdụ karịa na mbụ.
Ndị a ga-niile a ga-atụle nkịtị egwuregwu mgbanwe. Ọ dị mma? N'eziokwu, ọ bụrụ na ị na-enwe ihe mgbaàmà, ị na-agaghị eme ihe ọ bụla banyere ya. The atọ akụrụngwa bụ echocardiogram na m nwere ike ịgwa gị na ị nwere a structurally nkịtị obi.
Ndị ọzọ okwu, e nwere ndị mba n'oghere obi. E nweghị ndị na abnormalities na nkịtị size valvụ. Ọ dị ezigbo mkpa ka maara otú ihe ọzụzụ i mere.
Ya mere ọ bụrụ na ị bụ, ihe atụ, na-egosipụta na gị elu na inwe 20 awa a izu, obi muscle ga-abụ na ubé thicker na gbasara obi olu nke ekpe ventricle na ikekwe nri ventricle ubé ibu karịa nke a na-abụghị ndị na-eme egwuregwu. Ya mere ọ bụrụ na m hụrụ a septum obi gị muscle na gị, ọ bụ itoolu millimeters elu, n'ihi na ọ bụ 12 millimeters na nkịtị nso maka ihe na-eme egwuregwu ma ọ bụ ndị na-abụghị na-eme egwuregwu na-abụghị gị egosipụta na niile, m ga-eche na ị na ma nwee ọbara mgbali elu ma ọ bụ enwere oke ikpuchi nke obi obi. 12 millimeters bụ a na-ama ụma awọ mpaghara.
Na milimita 16 nke ahụ ga-abụ ihe na-adịghị mma. Ma ị bụ onye na-eme egwuregwu ma ọ bụ na ọ bụghị - Agụla m ọtụtụ isiokwu nwere njikọ na ọmụmụ na-atụ aro na mmega ahụ gabigara oke nwere ike ibute ihe egwu ahụike ogologo oge, site na arrhythmias ruo myocardial fibrosis ma ọ bụ usoro akwara obi, ejighị n'aka ihe abụọ n'ime atọ ndị a. bụ ma ị maara na ọ bụghị ụda ọma ya mere, ihe i chere nke a na atọ? - Right, ọma, ajụjụ mbụ bụ arrhythmia, obere azịza ya bụ ee, ọ dị. Anyị kwuru etu etu obi gị si adị nwayọ nwayọ, n'ezie, a na-amalite usoro ụda obi gị site na ebe pụrụ iche nke anaghị adịkarị ndị egwuregwu, nke a bụ n'ihi nsonaazụ nke mmega ahụ ogologo oge.
Na-eme egwuregwu agbasaghị nwere ike iji nwayọọ na obi udu, na anyị na-na-na na-ekwu banyere otú a bụ n'ihi na downregulation nke IKF ọwa na nwekwara ụba vagal ụda. Ugbu a, anyị maara na ọnụ ọgụgụ ndị na-eme egwuregwu na-emega ahụ ọtụtụ, ọkachasị ndị na-eme egwuregwu ntachi obi, nọ n'ihe ize ndụ dị elu nke ịmalite ọnọdụ a na-akpọ atr fibrillation. Ugbu a, atrial fibrillation bụ nnọọ nkịtị arrhythmia dị ka ị na-eme agadi na agbanyeghị, ma ọ bụrụ na ị na na na a ogologo oge na-eme egwuregwu ma ọ bụ ntachi obi na-eme egwuregwu na ọ bụ ọbụna karịa ogologo na-eme egwuregwu dị ka megide nta na-eme egwuregwu.
N'ihi ya, e yiri ụfọdụ akụkụ nke atrial size. Anyị na-na na na na na kpamkpam n'aka nke ihe kpatara NS maka nke a. E nwekwara mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Ọ bụrụ na nne na nna gị nwere atrial fibrillation, ị na-yikarịrị ka enweta ya. Ya mere onye na ọnọdụ m, m mere ogologo oge ntachi obi egwuregwu, nne na nna bụ ndị nwere atrial fibrillation. Aga m enweta fibrillation nke atrial n'ihi na m toro ogologo ma mee egwuregwu ntachi obi.
Eleghị anya enwere ihe ize ndụ karịa onye na-emebeghị ihe ndị a niile, mana enwere mkpụrụ ndụ ihe nketa na omume m na-amaghị, okpukpu anọ ma ọ bụ ise karịa onye na-emebeghị egwuregwu ntachi obi a, mana ị ga-eme etinye na n'ime Put na onodu na n'ozuzu abamuru nke ọzụzụ doro anya kari ukwuu nke ya. Ya mere, site na ogologo okwu mmega ị ịdịrị gị likelihood nke ụfọdụ ọrịa cancer, kansa eriri ala afọ, ara cancer ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, prostate cancer. Ha belata likelihood nke ọrịa obi, ọrịa degenerative ọrịa obi na ọrịa ndị dị otú ahụ dị ka ischemic ọrịa obi.
Reduce belata ohere nke ịmalite ịrịa ọrịa shuga, okenye na-amalite ịrịa ọrịa shuga. Improve na-emezi profaịlụ gị lipid. Ha ike ọkpụkpụ gị.
Ọtụtụ, ọtụtụ uru. Yabụ na ị nwere ntakịrị ntakịrị ihe egwu nke arrhythmia, atr fibrillation, mana ọ nwere nnukwu ihe ize ndụ nke ihe ndị a niile, ma ị na-adị ogologo ndụ, nke ahụ na-apụtawanyewanye, atr fibrillation, ọ bụ arrhythmia nke enwere ike ịgwọ ugbu a ozugbo na ihe n'ụzọ ahụ ike mmadụ bụ. Y’oburu na inwere ebe obi obi n’enweghi obara zuru oke, i nwere ike inwe onya.
esi kwụsị charley ịnyịnya
Akara bụ fibrosis, anyị makwaara na mgbe ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na-arụ ọrụ egwuregwu ogologo oge ga-enwe ọnya ndị ọzọ na obi ha ma ana m eche na ụfọdụ nke ahụ bụ n'ihi mmega ahụ mgbe ha nwere nje, yana ị maara ndụmọdụ na ọ bụrụ ị na-enwe ike ịnweta akwara gị, ị gaghị emega ahụ, echekwara m na nke ahụ bụ ezigbo ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ị nwere ihe a na-akpọ myocarditis n'ihi na ị na-enwe ahụ ike nke nwere ike ịmị ọkụ na-eduga na nsị na-adịgide adịgide, ma ọ bụ ọ nwere ike ibute scars agbanyeghị. Gịnị bụ anya bụ ma oké ntachi obi omumu nwere ike ime ka scars. Otu n'ime ụzọ anyị na-ele anya na nke akwara akwara na-achọ ka calcium etoju, nke bụ ọbara arịa nwere ike ibu tọrọ atọ calcium; ha thicken, na mbadamba nkume ndị e na warara calcium-jupụta akwara na-aka enwe anụ karịa na mmanu mmanu mbadamba nkume ndị e mere site na elu cholesterol nwere ike ụba akwara akwara calcification, karịsịa na ntachi obi na-eme egwuregwu, ma, ha adịghị ka na-na n'ihe ize ndụ nke obi ọgụ.
N'ụlọ ọgwụ anyị adịghị jupụtara ex-eme egwuregwu ndị nwere obi ọgụ. Ha na-a fullụ sịga ndị nwere nkụchi obi na ndị buru oke ibu na ndị na-elekọtaghị onwe ha. (Guitar music) - Ọfọn, nke a bụ ihe ọzọ GCN na-arịọ anyị ka anyị chee ihu na ọnwụ anyị, mana n'ezie ọ bụ ozi nnwere onwe dị mma.
Na nke a bụ ihe a na bụ nnọọ bara uru anyị ike, ọ bụ ezie na e nwere ndị nke anyị bụ ndị ga-abụ na a ga dụrụ achọ ọgwụ na ndụmọdụ na nke a akpan akpan isiokwu, ikekwe n'ihi akụkọ ezinụlọ, ma ọ bụ ịdaba na udi nke ndị mmadụ, ma dabere na ha Lifestyle ma ọ bụ afọ ndụ gị na-na a ubé elu n'ihe ize ndụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ edemede ọzọ na isiokwu ahụike, oge a na nchekasị na ahụike ọgụgụ isi na otu ịgba ịnyịnya ígwè nwere ike isi nyere aka na nke ahụ, wee pịa ihuenyo ugbu a, ana m etinye uwe.
Obi gị mma n'ihi jiri ịnyịnya ígwè?
Dị ka otu nnyocha site British Medical Association,ịgba ígwènaanị 32km (20 kilomita) kwa izu na-ebelata ikike ịmaliteobiọrịa site na 50% na-egbu egbu, n'ihi na ọ na-eji nnukwu akwara dị ụkwụ ụkwụobi gịọnụego, nke n'aka mma obi mma. N'ihi ya, ọ dị ezigbo mma makaobi.
Gịnị kwesịrị m obi ọnụego mgbe jiri ịnyịnya ígwè?
.B.ibelata n'etiti 15-25obi gaferekwa nkeji bụihenkịtị nso.Eprel 1 2019
Gịnị bụ ọnụọgụ obi dị egwu mgbe ị na-agba ịnyịnya?
N'ihi nandị na-agba ịnyịnya ígwèndị nwalere onwe ha ma nwee okeobi obinke 190, ihe atụ, a mpaghara 2 mgbalị ga achapu n'etiti 151 na 164gaferekwa nkeji.
Cycgba ịnyịnya ígwè ọ ka mma karịa ijegharị maka obi?
Cygba ígwèbụ ihe oru omakarịa na-eje ije, yabụ na ị ga-arụsi ọrụ ikena-eje ijebriskly and eleghị anya egosipụta yourobi, ngụgụ na akwara ndị ọzọ. N'akụkụ aka nke ọzọ,ịgba ígwèbụ ma eleghị anya na-erughị ike na gị n'úkwù, na ikpere na nkwonkwo ụkwụkarịa na-eje ije.
Na-ıgw `kwa ụbọchị ọjọọ?
Ọ bụ ezie na mmega ahụ kwa ụbọchị dị kaịgba ígwèga-mma gị obi obi, welie gị ọnọdụ, na mbo mbuli gị mma, ị nwere ike mfe pedal otu awaa ụbọchịna ghara ida a pound. O wutere gị nke ukwuu, ị nwedịrị ike nweta ole na ole. Inwe kwa ụbọchị ọ dịghị ihe mere na-eleghara ihe oriri gị.03.26.2021
Ndi ịgba ígwè na-ewusi ụkwụ ike?
Cygba ígwèmma n'ozuzu ọrụ gị ala ahu nana-ewusinke giụkwụakwara n'etinyeghị ha nsogbu. Ọ na-agbado gị quads, glutes, hamstrings, na ụmụ ehi.21.01.2020
Ntak apụghị m ga-esi m obi ọnụego mgbe jiri ịnyịnya ígwè?
Ọ bụrụ na ịnwere ike ghara inwenke giobi ọnụego elumgbeịgba ígwèọ bụ nanị n'ihi na ị na-na na a mma na-agba ọsọ karịa aonye na-agba ígwè. The echiche na-adịghị iji bulie gịobi ọnụegomaka Heck nke ya, ma ịkpọlite ​​ndị larịịgị ịgba ígwèike mere na gị zụrụ nke ọma obi usoro nwere ikenwetapụọ na bench ma banye na egwuregwu.
Na-agba na-agba ígwè obi ọnụego zones otu?
Ụfọdụ na-eme egwuregwu nwere ike maxMAKWEnaỌrụ Nchịkwa zonesmakaịgba ígwèna dị nnọọ nso, mgbe ụfọdụ yiri, ka hana-agba ọsọ Ọrụ Nchịkwa. Otú ọ dị, a ngwa ngwa ego na-eme egwuregwu na m na-azụ ndị nwere ma max ule mere na-egosi na kachaỌrụ Nchịkwanēche egosi a 5-10kwaaọnụ ọgụgụ dị elu mgbena-agba ọsọ.23 june 2016 Nọvemba
Cycgba ígwè ọ na-eme ka obi belata?
Ihe omumu obi na eme ka iheobi ọnụego, nke n’aka nke ya, na-ewusi gị ikeobimuscle, na-enyere aka jikwaa arọ, nalowersọbara mgbali elu. Na-eje ije, igwu mmiri, na ịgba egwú, na-agba a bike niile magburu onwe ụzọ iji nweta ndị a mgbaru ọsọ. Nov.
n'ihe ndina ya
Gịnị bụ a mma obi ọnụego ifelata?
Iji chọpụta oke gịobi obi, wepu afọ gị site na 220. Dịka ọmụmaatụ, nwanyị dị afọ 35 kachasịobi ọnụegobụ 220 mwepu 35 - ma ọ bụ 185gaferekwa nkeji. Ka itinye fat-ere ọkụmpaghara, ọ ga-achọ yaobi ọnụegona-pasent 70 nke 185, nke bụ banyere 130gaferekwa nkeji.
Mgbe na-amalite na-agba a bike ya n'ihi na obi ike?
Ihe ọ bụla pere mpe agaghị enwe otu mmetụta ahụ. Ị na-mkpa na-amalite tupu afọ 65, mgbe nke obi-egosi ida ukwuu nke ya plasticity ka remodel onwe ya. Ma ihe omumu na-arụ ọrụ kacha mma, ịgba ígwè bụ elu na ndepụta.
Olee otú na-agba a Bike reverse obi mmebi?
Ugbu a, nchọpụta na-agbawa obi na-egosi na ndị mmadụ nwere ike ịgbanwe obi mgbawa metụtara afọ, mana ha kwesịrị ịdị na-eme mmega ahụ oge niile dị ka ịgba ígwè — akụkụ nke ndụ ha kwa ụbọchị tupu oge agaa. Na a na-adịbeghị anya nnyocha e bipụtara na Circulation, cardiologists na Ut Southwestern na Texas Health Resources nwere
Gini mere eji acho nkpuchi obi m na igwe?
A nkwojiaka dabeere obi ọnụego ileba anya, Otú ọ dị, nwere ike ịbụ kemfe ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-anya na ọrụ gị etoju kwụsịrị bike, ma soro izu ike gị obi ọnụego. Ihe ọzọ ị ga-enyocha mgbe ị na-azụta ihe nyocha obi bụ ụdị njikọ ọ na-eji.